China Electric Mobile Racking System Kugadzira uye Fekitori | Huade
Iyo chassis yakagadzirirwa nemagetsi inogonesa iwo machira kufamba munzira, ichisiya kuvhurika kweforklift kuti isvike. Kuvhurwa kweaisisi imwe chete kunodiwa pachinzvimbo cheaisisi dzakawanda dze forklift yekupfuura senge mune yechinyakare inosarudzika racking system.
Matanho ekudzivirira akadai sekumisa zvechimbichimbi kumisa, mapikicha emagetsi ekuwana mukana, masystem ekuburitsa manyorerwo, masenenzi ekushomeka pamwe nemabhaisikopo ekudzivirira mafoto aripo kuti ave nechokwadi chekuchengetedza kwevashandi uye nezvinhu.
Iyo yemagetsi mobile racking system yakagadzirirwa PLC yekuita mirairo kubva kure kure neanoshanda, mashandiro mashandiro sekuwedzera mukana wekuvhura pakati pechassis yemhepo iri nani kutenderera inogona kuitwa kuburikidza nePLC kuronga, mabasa akadaro anoiita semi-otomatiki racking system .
Mafuremu akatwasuka akaiswa kune chassis, uye matanda anoshandiswa kurongedza mapallet uye kubatanidza zvinokwidziridzwa uye chisisi, dzimwe nguva masherufu anoshandiswa kuchengetedza zvinhu zvidiki. Nekuti kukwirira kunogona kusvika forklift kunowanzo kuve kwakaganhurirwa, ino racking system inowanzo kuve yekuchengetera ine yakaderera nepakati kureba.
Iyo yemagetsi mobile racking system yakanakira vashandisi vanoda kuwedzera kuchengetedza asi vakaganhurirwa nenzvimbo yepasi mudura. Iyo yakanyanya kushandiswa pasi nzvimbo inopa iyo mobile racking system sarudzo yakasarudzika yekutonhora kuchengetedza.
Zvakanakira yemagetsi mbozha racking system:
Yakawedzera nzvimbo yekuchengetera isina imwe nzvimbo yepasi
Kuchengetedza kwakadzika uye kushanda kwakadzikama
Kuparadzira modhi muhusiku inobvumira zvirinani kutonhora mweya kutenderera (yekutonhora kuchengetedza)
Kudzora system nema sensors akasiyana siyana kuti irambe ichishanda nharaunda yakachengeteka
Pashure: Shuttle Inotakura System
Zvadaro: Shuttle Racking Sisitimu